Rooble oo dabacsanaan u muujiyay siyaasiyiinta mucaaradka | Dhacdo
Home Wararka Maanta Rooble oo dabacsanaan u muujiyay siyaasiyiinta mucaaradka
Rooble oo dabacsanaan u muujiyay siyaasiyiinta mucaaradka
Maxamed Xuseen Rooble, Ra’iisal Wasaaraha Somaliya ayaa ugu baaqay siyaasiyiinta mucaaradka iyo shacabka Soomaaliyeedba inay is dejiyaan, diyaarna uu u yahay inuu la fariisto cid kasta oo cabasho ka qabta geedi-socodka arrimaha doorashooyinka ee dalka.
“Waxaan rabaa halkaan inaan uga sheego shacabka Soomaaliyeed in aan hadda ka soo baxay shir aan la yeeshay Beesha Caalamka, Safiiradeeda kala duwan ee u joogga Somaliya. Waxaan ka wadahadalnay waxyaabihii noo qabsoomay, doorashada heerka ay mareyso iyo sida aan u daadihin lahayn, loona gaari lahaa doorasho. Waxaan kaloo ka wadahadalnay sidii loo dardargelin lahaa doorashadan, loona gaari lahaa hadafka ah inay dalka ka dhacdo doorasho.” Ayuu yiri Ra’iisal Wasaaraha.
Isagoo hadalkiisa sii wata ayuu yiri “Waxaan kaloo isku afgaranay in wadahadaladeena ay socdaan, joogtana ay yihiin, gaar ahaan anigana aan u sheegay markasta Culima’udiinka, Ururada Bulshada iyo haweenkaba inaan diyaar u ahay inay ii yimaadaan, qof kastoo daneynaya ama cabasha qaba, sidoo kalana aan u sheegay inay ila fariistaan, diyaarna u ahay inaan cabashadooda xaliyo, haddii ay ahaan laheyd doorashada, mid guud iyo mid gaar ahaaneydba.”
Waxa uu intaa ku daray “Sidaa darteed shacabka Soomaaliyeed waxaan u sheegayaa is dejiya, aniga oo masuul ka ah xukuumadda, Ra’iisal Wasaarahana ka ah waxaan idin sheegayaa inaan diyaar u ahay inaan qof kasta qaabilo, kalana hadlo wixii caqabad ah ama cabasho ah ay dareemayaan inay jirto.”
Previous articleCumar Filish oo caawa la kulmay kooxda Gobolka Banaadir (SAWIRRO)
Next articleXildhibaanada Waqtigooda dhamaaday oo maanta kulan ku leh Muqdisho